Tantaran'ny Instagram: ampio sary sy horonan-tsary amin'ny tantaranao (miaraka amin'ny tetika) | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hanampiana sary sy horonan-tsary avy amin'ny rool mankany amin'ny tantaranay Instagram
Ny tantara Instagram dia, tsy isalasalana, iray amin'ireo vaovao lehibe amin'ny herinandro. Ny fipetrahana farany teo amin'ny lahasa iray tena mitovy amin'ilay efa hitantsika tao amin'ny Snapchat Ao amin'ny tambajotra sosialy azo sary dia tsara fa niteraka savorovoro, ary tsy mahagaga. Ny fahaizana mamorona tantara amin'ny Instagram ary mizara azy ireo eo noho eo dia manome ny fampiharana vaovao izay tsy noeritreretinay ho hita akory na dia mbola tsy fantatsika aza na ho tsara na ho ratsy.
Raha manapa-kevitra ny ho avy raha toa ity hiasa vaovao ity hijanona sa hijanona ho anecdotal fotsiny, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny manararaotra azy. Ary, na dia mbola safidy fototra aza ny Instagram Stories raha oharina amin'ny Snapchat, dia misy lafiny mahaliana sasany.
1 Tantara amin'ny Instagram inona izany?
2 Ahoana ny fametrahana sary amin'ny tantara Instagram
3 Ahoana ny fomba fampidinana sary marobe amin'ny Tantara Instagram
4 Ampidiro ny horonan-tsary amin'ny Instagram Stories
5 Tantara Instagram, iza no mahita azy ireo?
6 Fetsy tantara Instagram
Tantara amin'ny Instagram inona izany?
Instagram Stories (Tantara amin'ny dikanteny anglisy), no safidy natombok'i Instagram fotoana vitsy lasa izay mba hifaninana amin'i Snapchat. Ny lakilen'ny Stories Instagram dia ny zava-misy fa mifototra amin'ny votoatin'ny ephemeral izy ireo, izany hoe, ny horonan-tsary sy sary izay ampakarinay dia haharitra segondra vitsy rehefa jerena, ary avy eo dia hokapaina izy ireo.
Ity atiny misy mandany andro ity dia hijanona eo amin'ny mombamomba anay mandritra ny 24 ora, ary avy eo dia hesorina. Izy io dia miasa toy ny Snapchat. Ankoatr'izay, ireo tantara azontsika ireo, na amin'ny sary na amin'ny horonan-tsary, dia azo ovaina, tsy amin'ny sivana, fa miaraka amin'ny borosy, effets, sticker ary Emojis izay hahafahantsika manome tombony amin'ny tantaran'ny Instagram, indrindra amin'ny hizara fotoana tokana amin'ireo mpanaraka anay.
Ahoana ny fametrahana sary amin'ny tantara Instagram
Iray amin'izany ny manampy sary sy horonan-tsary mivantana avy amin'ny roofinay. Safidy iray, na dia marina aza fa ny Snapchat dia nampiditra vao tsy ela akory izay, dia tsy nitovy. Voalohany indrindra, ny Snapchat dia mamela anao mampakatra atiny rehetra ao anaty roola, na eo aza ny halavany. Mifanohitra amin'izany, Ao amin'ny Instagram Stories dia tsy afaka misafidy afa-tsy iray izay nampiana tao amin'ny tranomboky tao anatin'ny 24 ora lasa izay, zavatra izay manohana ny fahamaimasoana natao ho an'ity karazana tolo-kevitra ity. Ary, faharoa, satria amin'ny Instagram ny atiny dia haseho amin'ny efijery feno, na sary, pikantsary na horonan-tsary, zavatra izay tsy azo atao amin'ny Snapchat.
Raha te hiditra amin'ity votoaty ity amin'ny rool -amin'ny 24 ora farany, dia tadidio-, tsy mila mankany amin'ny efijery fisamborana afa-tsy ny tantarantsika Instagram (ao amin'ny kisary eo amin'ny zoro ankavia ambony na amin'ny fikorisa amin'ny rantsan-tànantsika amin'io lafiny io) ary, indray mandeha ao, mikorisa midina. Rehefa avy nanao an'ity hetsika ity Thumbnail ny horonan-tsary sy sary nampiana ilay roul nandritra ny andro kalandrie farany dia haseho eo an-tampony, afaka misafidy, manova ary mampakatra ilay tiana indrindra amin'ny tantarantsika.
Ahoana ny fomba fampidinana sary marobe amin'ny Tantara Instagram
Ny tantarantsika Instagram dia tsy misy farany, midika izany fa afaka mampiditra atiny maromaro tsy misy fetra amin'ny tantaranay Instagram izahay, miankina amin'ny fotoana sy ny faniriana ananantsika. Mitovy tanteraka ny fandidiana, raha mampakatra sary ao amin'ny Tantara dia mila manao ireo dingana fotsiny isika tamin'ny lesona teo aloha, na maka ny fotoana mivantana. Vantany vao nampakatra sary tao amin'ny Instagram Story izahay dia hiverina amin'ny menio lehibe, izany hoe, ny Timeline Instagram.
ankehitriny Misosa miankavia indray isika ary afaka manampy sary amin'ny Instagram Story na sambory mivantana ny fotoana tadiavintsika, amin'ny horonantsary raha tazomintsika mandritra ny fotoana lava ny bokotra fakana sary, na sary raha omentsika fikitihana an-kolaka.
Ampidiro ny horonan-tsary amin'ny Instagram Stories
Manomboka amin'ny fototra ananantsika fa manana rafitra roa handefasana horonantsary ao amin'ny tantaranay Instagram izahay, noho izany dia azonay ampiasaina voalohany ny fomba fototra, ny fomba fisamborana. Handefa horonan-tsary miaraka amin'ireto dingana manaraka ireto izahay:
Ao amin'ny Timeline Instagram dia mivezivezy avy eo ankavia miankavanana na tsindrio ny «add History».
Izahay dia mifantoka amin'izay tian-tsikaritra
Avelantsika tsindry ny bokotra "fakana" ary horonantsary horonam-peo
Vantany vao voarakitra, na tapaka ny horonantsary, satria misy fetr'andro, dia afaka manitsy azy araka izay tadiavintsika isika ary mampakatra azy mivantana amin'ny tantarantsika Instagram. Ny fomba faharoa dia mitovy amin'ilay ampiasaintsika handefasana sary izay ananantsika eo amin'ilay rool:
Atsofotsika avy any ambany ny rantsan-tanantsika, hanesorana ilay roulol
Afaka misafidy horonantsary voarakitra ao anatin'ny 24 ora farany isika
Hohafohezina ho faran'izay lehibe avelan'ny Instagram Stories ny horonan-tsary
Ary ity no fomba mora indrindra handefasana sary sy horonan-tsary ao amin'ny Instagram Stories. Toy ny mahazatra, ao amin'ny Actualidad iPhone izahay dia manome anao fampianarana farany tsara indrindra mba tsy halainao amin'ny antsipirihany amin'ny tambajotra sosialinao.
Tantara Instagram, iza no mahita azy ireo?
Tsotra be ityHiankina amin'ny fampifanarahana, ny fiainana manokana. Ary raha manana misokatra Instagram isika mba hahitan'ny rehetra azy, dia tsy hanana fomba hisakanana ny karazana mpampiasa tsy hiditra amin'ny Stories Instagram antsika izahay. Noho izany, ny tantarantsika dia ho imasom-bahoaka tanteraka, amin'ireto tranga ireto dia ampirisihina mafy isika mba handray an-tanana fa ho hitan'izy ireo ny zavatra avoakantsika na aiza na aiza, raha ny marina. mazàna no isehoan'izy ireo indraindray ao amin'ny Ny tantara dia fahanana isaky ny toerana manodidina antsika. Raha miteraka fisalasalana rehetra izany dia afaka mikorisa hatrany ambany hatrany hatrany isika hahitantsika izay mpampiasa mijery ny tantarantsika Instagram.
Raha misy ny Instagram "mihidy"Amin'ny alàlan'ny fikirakirana, ireo mpampiasa nomenay alalana hanaraka ihany, izany hoe ireo izay nekena ny fangatahana fanaraha-maso dia afaka miditra amin'ny tantaranay Instagram. Amin'ity tranga ity dia tokony hanahirana antsika kokoa ny fiainantsika manokana raha toa ka voafidy miaraka amin'ireo mpampiasa manaraka antsika isika.
Fetsy tantara Instagram
Ny tantaran'ny Instagram dia manana fahafaha-manamboatra azy manokana, na izany aza, indraindray mety ho lasa fampiharana somary sarotra izy io, noho izany dia tianay ny hanao anao ho fanangonana kely ny inona amin'ireo tetika miafina sy mandaitra indrindra hahazoana ny fampisehoana rehetra avy amin'ny Instagram Stories. Ka raha tianao tsy hitovy amin'ny olon-drehetra ny tantaranao dia manava kely kely ary mahazoa valiny tsara indrindra (ary noho izany ny mpanaraka betsaka indrindra), araraoty ity lisitra ity miaraka amin'ny 7 Fetsy tantara Instagram zava-dehibe indrindra entinay anio.
Atsaharo ny filalaovana: Mba hampitsaharana ny famerenana ny tantara Instagram hitantsika dia ampy ny mamela ny rantsan-tànantsika manindry ny faritra rehetra amin'ny efijery. Amin'izay fotoana izay dia handeha "miato kely" ny Instagram Story. Rehefa manafaka ny rantsan-tanana isika dia hitohy ny lalao.
Mandehana mankany amin'ny horonantsary manaraka na taloha: Raha te handeha amin'ny horonantsary manaraka na taloha dia mila tsindrio fotsiny ny sisin'ny efijery izay mifanitsy amintsika, ny lafiny ankavanana hampandroso ny horonantsary na ny ilany havia mba hiverenana amin'ilay teo aloha.
Ahoana no mandefa horonan-tsary avy amin'ny galeriana: Mba hamoahana izay horonan-tsary avy amin'ny galeriana dia manararaotra tetika iray voalaza teo aloha izahay, tsy maintsy mihetsika fotsiny avy eo ambany hatrany amin'ny mpamorona Story ary hiseho daholo ny atiny nosoratantsika tao anatin'ny 24 ora farany, dia safidintsika ary halefa io.
Ahoana no fomba firaketako haingana ny tantaran'ny Instagram? Eny, ny fomba haingana indrindra handraketana ny tantaran'ny Instagram dia ny fikosehana miankavia sy miankavanana eo amin'ny Timeline Instagram, dia hisokatra haingana ny mpamorona ny Tantara.
Azonao atao ve ny manamboatra na manova ny fakantsary rehefa manoratra tantara Instagram iray? Mazava ho azy, noho izany dia mila manao fihetsika mitovy amin'ny fakantsary rehetra isika, miaraka amin'ny rantsan-tànana roa manitatra azy io dia hanao zoom. Ary raha manindry haingana indroa eo amin'ny efijery isika dia afaka manao selfie.
Ahoana no mifidiana loko bebe kokoa ao amin'ireo lahatsoratra ny tantaran'ny Instagram: Ho fanampin'ireo loko izay atolotry ny fampiharana ho antsika rehefa manoratra lahatsoratra ao amin'ny tantaran'ny Instagram isika dia afaka misafidy eo amin'ny paleta miloko raha mitazona tsindry lava amin'ny rantsantanana amin'ny iray amin'ireo loko isika.
Ahoana no avadiho ny Tantara Instagram ho lahatsoratra mahazatra: Mba hanaovana izany dia tsy mila mankany amin'ny Instagram Story izay navoakanay vao haingana isika ary tsindrio ireo teboka telo eo amin'ny zoro ambany ambany, avy eo ny mety hisian'ny zarao toy ny paositra.
Ary ireto no fito Fetsy tantara Instagram mifandraika bebe kokoa izay hahafahanao mahazo ny tsara indrindra amin'ny Instagram Stories, ankehitriny mandehana zarao. Fotoana izao hampiharana ny zavatra rehetra nianaranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ahoana ny fomba hanampiana sary sy horonan-tsary avy amin'ny rool mankany amin'ny tantaranay Instagram
silvia mazariegos dia hoy izy:
ny hany zavatra tadiaviko dia ny hahafantatra hoe amin'ny fomba ahoana amin'ny solosaina no ahitako ireo tantara amin'ilay ibstagram
izay tiako ho fantatra
Mamaly an'i silvia mazariegos
Luz Lopez dia hoy izy:
ary afaka tianao ve izany?
Valio i luz lopez
azo tiavina amin'ny sary instagram ve ny sary sy ny horonan-tsary?
Amir dia hoy izy:
Te hahafantatra fotsiny aho raha afaka mampakatra tantara amin'ny Istagram avy amin'ny pc
Valiny tamin'i Amir
Salama, fohy ny fangatahako ... fa manintona ny saiko ireto manaraka ireto:
Mampakatra tantara iray aho ary hitako fa ny iray amin'ireo mpampiasa «matetika mahita ahy» ao amin'ny iray amin'ireo tantara dia miseho amiko miloko volondavenona, ary milaza miafina ... (midika izany ??? =) raha TSY ampiendreko izany ka tsy mahita ahy izy, ny mifanohitra amin'izay ... miandry valiny aho, tsy nisy nahalala ny hilaza amiko tsara. MISAOTRA
Valiny tamin'i Vicky
Apple dia efa nanandrana solomaso hafa Augmented Reality
Beat Fever, kilalao mozika toy ny taloha